Netherlands na Austria Euro 2021 Amụma na Betgba Ndụmọdụ Ndụmọdụ Nyocha - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 14, 2021No Comments
Egwuregwu Netherlands nke abụọ na euro ga-emegide Austria. Egwuregwu Netherlands na Austria ga-ebido na 9PM CEST na June 17 2021 na Amsterdam Arena.
N’egwuregwu egwuregwu anyị maka egwuregwu Netherlands na Austria anyị ga-enye gị amụma, esemokwu na ụfọdụ usoro ịkụ nzọ maka egwuregwu Euro 2021 a.
Ndi Netherlands weputara mmeri n’egwuregwu nke mbu ha na Ukraine n’ihi isi onye isi na Dumfries.
Agbanyeghị na ọtụtụ Fans nwere ike ịrụ ụka na Netherlands emeghị nke ọma n’ihi na ọtụtụ ohere furu efu, Depay adịghị ka ọ nwere nnukwu mmetụta na egwuregwu ahụ na ihe mgbaru ọsọ 2nd nke Ukraine nwere ike igbochi site na akara ka mma site na nchekwa .
Mana anyi kwesiri ilekwasị anya na ihe oma karia mgbe anyi chebara ihe di mkpa anya.
Mmeri a gosipụtara mmalite dị mma maka Oranje na-ejedebe usoro egwuregwu egwuregwu 4 nke malitere na 2008 mgbe ndị Russia kụrụ Netherlands na njedebe ikpeazụ ma tufuo egwuregwu egwuregwu egwuregwu ya niile na 2012 ma ghara iru eru maka mbipụta 2016. nke Ek.
A na-ejikọ ndị na-eto eto nwere nkà dịka Ake, De light na Timber juputara n’azụ ndị otu a dị afọ iri na itoolu. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị na-agbachitere, karịsịa etiti azụ ka a dochie anya n’oge egwuregwu.
Ndi odi na Netherlands achotala ndi isi ha. Mgbe egwuregwu ahụ Frank de Boer kwuru “Nke a bụ otu m ga-achọ ịhụ maka ọtụtụ akụkụ”
Nke ahụ bụ akara ngosi ọzọ dị mma na-atụle De Boer nwere obere nkatọ n’oge gara aga maka na-agbanwe agbanwe mgbe niile ma ọ naghị ekpebi ihe kachasị mma ya. na iju Fans.
Netherlands Predreded n’ahịrị
Ọ bụrụ na Frankie De Jong rapara n’okwu ya, anyị na-ebu amụma na usoro mgbanwe na-agbanweghị agbanwe maka egwuregwu Netherlands na Austria na naanị mgbanwe a na-ewebata Winjald n’ọnọdụ Patrick van Aanholt
Maarten Stekelenburg, Daley Blind, Stefan De Vrij, Timber, Dumfries, Winjald, Frankie De Jong, Winjaldum, De Roon, Depay, Weghorst
Formdị Austria na usoro nwere ike
Ha gbara egwuregwu 5 tupu egwuregwu ha na North Macedonia na Euro 2020 na-emeri naanị egwuregwu 1 megide Faroe Island, otu ndị nọ ugbu a na 113th.
O yiri ka ha achọpụtala ụdị ha n’oge mmeri ahụ megide North Macedonia na egwuregwu mmeghe ha na Euro 2020.
Agbanyeghị na ha bidoro ihe egwu ebe ihe egwuregwu nke njehie dugara ha inye goolu, Austria jiri ọsọ na agụụ wakpoo ọkara nke abụọ.
Gregoritsch na Arnautovic bụ nnukwu ego Austria chọrọ ma na anyị chere na ha ga-ejide n’aka na ndị na-ebido na Netherlands na Austria egwuregwu na mgbe njehie Schlager dugara goolu Goran Pandev maka North Macedonia, anyị na-atụ anya Schlager ka ọ nọchie ya.
Ọstrịa na-achọ ịpị ndị iro ha na nke a gụnyere na azụ ha. Ha na-anwa ime ngwa ngwa gbanwee wee wakpo goolu.
Austria Pụrụ iche n’usoro
Schlager, Ulmer, Dragovic, Hinteregger, Lainer, Alba, Xaver, Laimer, Baumgartner, Gregortisch, Arnautovic
Netherlands na Austria amụma
Tụle otú ụzọ abụọ ndị otu a na-esi etinye nke a ga-abụ egwuregwu na-atọ ụtọ. Ndị Netherlands na-egwu egwuregwu bọọlụ nwere ọsọ na-aga ọsọ ọsọ iji chọta ma na-erigbu ohere nke onye iro ha ebe Austria na-achọ ịpị elu na oke iwe.
Nke a nwere ike ịpụta na anyị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ ihe na egwuregwu a n’etiti Netherlands na Austria.
Onye Netherlands ga-anọ jụụ n’okpuru nrụgide nke Austria ga-etinye ha na nke nwere ike ịpụta ntụgharị uche maka Oranje ebe Winjaldum na-egwuri egwu karịa ma jiri ahụmịhe ya na-ejigide nwayọọ na-agafe.
Agbanyeghị na amamịghe na ngwa ngwa na-atọ ọchị ma nwee ekele, ndị na-etiti etiti nwere ike iwulite ọtụtụ ihe nke ọma ma nwayọ nwayọ iji ohere ndị egwuregwu Ọstrịa nwere ike ịhapụ na mbọ ha na ịpị ike.
Austria n’akụkụ ha nwere ike ịtụ anya na Netherlands ga-eme nke ahụ ma nwee ike ịpịtụ obere ihe iwe iji zere ohere imeghe ohere dị ukwuu maka Netherlands.
Emechaa ihe anyị buru n’amụma na mbụ, nke a nwere ike ịdị ka ihe nzuzu ma ugbu a ị nwere ike iche na nke a agaghị abụ egwuregwu dị elu.
Mana, ozugbo eburu ihe mgbaru ọsọ mbụ, nke ahụ bụ mgbe egwuregwu ahụ ga-apụta ihe dị ka otu egwuregwu abụọ na-agba mbọ ịlụ ọgụ ka ọ pụta n’elu.
Ọ bụrụ na ndị Netherlands na-achọ imeri egwuregwu a, ha ga-ahụrịrị na ha ga-anọrịrị kọmpat na-agbachitere ozugbo ha tufuru bọọlụ.
Ihe nchebe ga-ezere mmejọ ha site na egwuregwu gara aga megide Ukraine.
Anyị na-atụ anya ka egwuregwu a bụrụ ntakịrị nwayọ na ọkara nke mbụ yana ihe mgbawa na ihe na-atọ ụtọ na ọkara nke abụọ belụsọ na otu n’ime ndị otu gụrụ na ọkara mbụ.
Amụma anyị maka egwuregwu Netherlands na Austria bụ Netherlands na-emeri site na njedebe goolu 1 na egwuregwu ga-akwụsị 2-1.
Netherlands na Austria Odds
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka egwuregwu Netherlands na Austria:
Netherlands 1.53 ka 1.57 Dọta 3.9 ka 4.1 Australia 5.5 ka 6
Ọ dị ka ndị na-ede akwụkwọ na-ekwenye na amụma anyị maka egwuregwu Euro 2020 n’etiti Netherlands Austria yana ha nwere ntụkwasị obi siri ike maka mmeri maka Netherlands nke egosipụtara na-erughị nsogbu 2.0 maka Netherlands na oke 5.5 maka Austria.
Dị ka anyị si B-Bets bụ nhọrọ kachasị mma n’ihi na ha na-enye ezigbo nsogbu. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ itinye nsonaazụ egwuregwu dị mfe ị nwere ike ịmasị nsogbu ndị a.
Nwere ike pịa na foto dị n’okpuru ebe a iji gaa b-Bets ma tụnyere nsogbu ahụ maka Netherlands na Austria wee hụ ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị.
Netherlands- Austria Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Ọ dị ka Netherlands ga-emeri egwuregwu a. Kedu nke bụ ihe kpatara na anyị anaghị akwado gị ka ị zụta nzọ egwuregwu dị mfe na Netherlands.
Ihe kpatara ya dị mfe, nsogbu maka egwuregwu a maka Netherlands dị n’okpuru 2.0 nke anaghị eme ka ọ bụrụ uru bara uru.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụtakwu gbasara ihe kpatara anyị ji eme nkwanye a ị nwere ike ịlele ederede anyị gbasara ndụmọdụ bọọlụ bọọlụ na otu ị ga – esi mepụta usoro ịkụ nzọ bọọlụ gị.
Maka egwuregwu Netherlands na Austria anyị na-atụ aro nzọ ndị a. Anyị ga-ekwukwa banyere ihe egwu dị na nzọ ọ bụla:
Netherlands iji merie na ihe mgbaru ọsọ 2.5 gbanyere n’oge egwuregwu ahụ. Nsogbu 2.5. Netherlands iji merie na ihe mgbaru ọsọ 1.5 gbanyere n’oge egwuregwu ahụ na ìgwè abụọ ahụ iji nweta akara. Nsogbu 3.5, ihe egwu dị ala. Mkparịta ụka kachasị njọ na Netherlands iji merie 3.25, ihe egwu dị obere na ọkaraHandicap nke 0-1 (Austria nwere uru mgbaru ọsọ 1) wee see. Nsogbu 3.6 dị ala. Lelee ebe ị na-akụ nzọ. Nsogbu 4.20 dị egwu na elu. Mkparịta ụka kachasị njọ, Netherlands iji merie 2: 1, nsogbu 21, ihe egwu dị elu.